> Resource> Alternatives> Best Recuva Alternative na Windows na Mac OS X
Recuva bụ a free ngwá ọrụ maka Windows na Mac OS X, na e mere na-naghachi ehichapụ data gị ike mbanye, esịtidem ma ọ bụ mpụga. Ọ bụla data na e ehichapụ draịvụ ike gị nwere ike natara n'ime ole na ole clicks. Ọzọkwa ya-enye gị na-agbake data site na iPhone, ma naanị jailbroken iPhones. Usoro ihe omume na-enye a mara mma isi interface, ma na-enye nkọwa zuru ezu banyere nke ọ bụla nhọrọ na ị nwere ike họrọ si. Otú ọ dị, ndị na-adịghị na-achọ iji Recuva nwere ihe ndị ọzọ nhọrọ dị kwa. A ezi Recuva ọzọ bụghị ike na-na-ahụ internet, ekele na plethora nke dị iche iche ihe omume dị. Ebe a bụ ụfọdụ ezi uzo ozo ka Recuva maka Windows na Mac OS X:
Recuva ọzọ 1: Wondershare Data Recovery
Recuva ọzọ 2: Wondershare Dr.Fone maka iOS
Sistem: Mac na Windows
The Wondershare Data Recovery bụ oké ngwá ọrụ na-eji mgbe ọ na-abịa data mgbake, na dị maka ma Mac OS X na Windows. Nke a bụ oké Recuva Mac ọzọ bụ ndị na-ahụ na Recuva bụghị dị ka anabata dị ka o kwesịrị. Wondershare Data Recovery Nwere ọtụtụ dị iche iche atụmatụ, na atụmatụ a N'otu aka ahụ akowaputara ndu onye ọrụ interface dị ka Recuva, nke na-enye ohere maka nnọọ mfe mgbake nke data. Wondershare Data Recovery Bụ oké Recuva ọzọ, na ọbụna na-enye a ukwuu ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ karịa ya counterpart.
- Iweghachite nkwado maka ruo 550 dị iche iche formats.
- Nchekwa mgbake ebe data na-natara na a na-agụ naanị gburugburu ebe obibi.
- Videos, foto, ozi ịntanetị, akwụkwọ, wdg nwere ike natara bụghị naanị site ike draịva, kamakwa site dijitalụ ese foto, mobile igwe, MP3 Player, na a kpọrọ ndị ọzọ connectable ngwaọrụ.
- Gụọ nanị, n'ihi ya ọ dịghị imebi gị faịlụ ma ọ bụ usoro ike mbanye.
- Archives, videos, foto na a kpọrọ ndị ọzọ faịlụ formats nwere ike mfe gbakee.
1. Dakọtara na a nnukwu nso nke formats
2. -Arụ ọrụ nke nanị
3. -Enye ohere maka a mgbake Michael
1. Adịghị arụ ọrụ maka iPhone, iPad na iPod aka
The Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) bụ oké obere omume na e mere na-naghachi ehichapụ oyiyi, videos na music faịlụ ogologo gị iDevice. The Wondershare Dr.Fone maka iOS e kere naghachi ehichapụ data gị iDevice. Ọ ga-abụ ihe iPhone, iPod Touch ma ọ bụ onye iPad, bụla na ngwaọrụ na-akwado ndị na iOS ike ga-eji na Wondershare Dr.Fone maka iOS. A keukwu ndepụta nke ngwaọrụ a na-akwado,-aga n'ụzọ nile azụ ka iPhone 3GS, na iPad 1 na iPod aka 4.
- The omume nwere na-esi ọtụtụ Michael usoro.
- Data na-natara n'ime nkeji ole na ole.
- A ọtụtụ dị ukwuu nke iDevices na-akwado, malite na iPad 1 na iPhone 3th Ọgbọ.
1. Data na-natara na a okwu nke nkeji
2. Natara data na-categorized na a n'ụzọ kwesịrị ekwesị; foto, music, video faịlụ, wdg
3. Voicemails na kọntaktị nwekwara ike gbakee.
1. Adịghị arụ ọrụ maka kọmputa na ndị ọzọ na media storages
Media Idi maka Mac Alternative: An All-na-otu kasị, vasatail Video Ntụgharị
Best Ndanda Video Convertor Alternative: Ọrụ Faster, na-akwado More Formats
Nweta Best Clip Ntụgharị Alternative